Yakavhura vhezheni itsva yeQt Design Studio 1.3 uye idzi nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Yakatangisa vhezheni itsva yeQt Design Studio 1.3 uye idzi ndidzo nhau dzayo
Vagadziri ve projekiti yeQt vakazivisa kuburitswa kweQt Design Studio 1.3, nharaunda kugadzira dhizaini yekushandisa uye kukudziridza graphical zvinoshandiswa zvichibva paQt. Qt Dhizaini Studio inorerutsa kubatana pakati pevagadziri nevagadziri kugadzira zvinoshanda prototypes zveakaomarara uye anotyisa maficha.
Vagadziri vanogona kutarisisa graphic dhizaini chete, nepo vanogadzira vanogona kutarisa mukugadzira logic yekushandisa vachishandisa otomatiki inogadzira QML kodhi yezvigadzirwa zvemadhizaini.
Uchishandisa kufambiswa kwebasa kunopihwa neQt Dhizaini Studio, inogona kushandura magadzirirwo akagadzirwa mu Photoshop kana mamwe graphic editors mukuita prototypes yakakodzera kumhanya pane chaiko zvishandiso mumaminetsi.
Iyo yekutengesa vhezheni uye yeruzhinji edition yeQt Dhizaini Studio inowanikwa. Iyo yekutengesa vhezheni inounzwa mahara, inobvumidza kugoverwa kweakagadzirira-akagadzirwa echinongedzo zvinhu kune chete kune ivo vane yekutengesa Qt rezinesi. Iyo Nharaunda Yekushambadzira haina kumisikidza zvirambidzo pakushandisa, asi haisanganise ma module ekupinza Photoshop uye Sketch mifananidzo.
1 Chii chitsva muQt Dhizaini Studio 1.3?
2 Maitiro ekuisa Qt Dhizaini Studio 1.3 paLinux?
Chii chitsva muQt Dhizaini Studio 1.3?
Nokuburitswa kweiyi vhezheni itsva yeQt Design Studio 1.3 kugona kweQt Bridge yemu Sketch module kwakawedzerwa, chii inokutendera iwe kuti ugadzire yakagadzirira-kushandisa-zvinongedzo zvinoenderana nemagadzirirwo akagadzirwa muSketch uye nekuzvitumira kunze kune QML kodhi.
Mukuwedzera rutsigiro rutsva rwekutsiva mavara mune module rwasimbiswa.
Zvakaren Wakawedzera kugona kuburitsa mifananidzo mu vector SVG fomati (kumberi raster mafomati akatsigirwa), ayo anogona kuyerwa muQML.
Kuonekwa kweiyo interface yekutarisa zvivakwa kwashandurwa, yashandurwa kuti ishandise Qt Kurumidza Kudzora 2 uye ikozvino yanyatsogadziriswa kuburikidza nematema.
Iko kusununguka kwekushanda nemaumbirwo anotenderera kwakagadziridzwa zvakanyanya, iyo yekukwevera uye kudonhedza rutsigiro yaonekwa uye mukana wekusarudza kuwedzera yekutsvedza kudzora. Tsigiro yemazhinji-chikamu mabhureki akawedzerwa, zvichikubvumidza iwe kumisikidza zvivakwa zvezvinhu zvakawanda kamwechete.
Uyewo zvakare mutsva curve mupepeti weanoratidzira, iyo inokutendera iwe kugadzirisa iyo yekumisikidza mac curves emazhinji kiyi mafrimu mukutarisa, yakafanana neyakajairwa mamirioni ekudzora maturusi mune 3D mapakeji.
Iyo nyowani gradient manejimendi dialog yakawedzerwa kune iyo edhari yemidziyo. Iyo mharara yemavara yakagadziridzwa, mune chikamu chine mavara akambosarudzwa chinowanikwa. Iyo yekubatanidza mupepeti yakagadziridzwa uye ikozvino yakavakirwa pane iri nyore widget yekugadzirisa kodhi yeQML.
Zvakare kucherechedzwa ibasa risati rapedzwa kugadzira WebAssembly-based QML muoni, iyo inobvumidza iwe kurongedza QML mapurojekiti ewebhu, ayo iwe aunogona kushanda nawo kuburikidza nebrowser.
Maitiro ekuisa Qt Dhizaini Studio 1.3 paLinux?
Kune avo vanofarira kugona kuisa ino nharaunda yekusimudzira, vanogona kuzviita nekutevera rairo dzatinogovana pazasi.
Sezvo Qt Dhizaini Studio ine mavhezheni maviri mune iyi nyowani kuburitswa (kunyanya iyo yakabhadharwa vhezheni uye yemahara imwe).
Mune ino kesi isu ticha tarisa pane iyo Qt Dhizaini Yekugara Nharaunda, yatingawana kubva pane iyi link iripazasi.
Kana isu tinogona kuvhura terminal mune yedu system uye mairi tichaenda kunyora murairo unotevera:
Kana kurodha pasi kwapera, isu tinopa mvumo yekuuraya kune iyo faira ne:
Uye isu tinogona kuendesa iyo faira ne:
Finalmente kune avo vanofarira iyo yakabhadharwa vhezheni kana kuda kuziva kuti vayedze, ivo vanogadzira vanopa iwo mapakeji ane marezinesi ekutengesa anowanikwa kuburikidza neyekuisa online.
Iyo yekubatanidza kuyedza yakabhadharwa vhezheni ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Yakatangisa vhezheni itsva yeQt Design Studio 1.3 uye idzi ndidzo nhau dzayo
QMapShack chishandiso chakanakisa chekuronga nzira uye GPS data
Richard Stallman anosiya chigaro kubva kuMIT neFSF